Zvipo zvakanakisa zvetekiniki Valentine | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 07/02/2021 10:00 | General
Sezvo isu tichigara tiri pano kusvika kukubatsira nemazuva anonakidza ekutenga, uye ndezvekuti Zuva raValentine ndeimwe yenguva dzakakodzera dzekupa sezvipo. Isu takaita diki muunganidzwa weizvo isu tinotenda kuti izvo-zvinofanirwa-kunge uine zvipo kana iwe uri tekinoroji anoda kana uchingoda kuratidza mumwe wako kuti unozvida zvakadii.
Nekuti izvo Tinokuunzira akawanda zvipo zvezuva rezvetekinoroji Zuva raValentine. Usapotsa nekuti zvigadzirwa zvese zvine chisimbiso chedu chekubvumidzwa Kuve zvigadzirwa zvatakamboongorora uye zvakatipa mibairo inoshamisa.
1 Kuti uvandudze nekufona
2 Kuti utange mune Yakabatana Imba kana Smart Imba
3 Multimedia uye varaidzo
Kuti uvandudze nekufona
Teleworking yatanga kuita chikamu chedu chezuva nezuva nechisimba, vazhinji venyu munogona kunge musina "basa" kumba rakagadziriswa kune zvese zvinodikanwa izvo zvingafanira chinhu chakadai. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakachipa, tinotanga neODY Wireless keyboard uye mbeva kurongedza kubva kuTrust.
Kwe chete € 24,99 iwe unogona kuwana yakasarudzika yakakwana sisitimu, sekhibhodi, Isu tine anosvika gumi nematanhatu akafanogadzirirwa makiyi ese ari maviri Microsoft Office uye multimedia manejimendi. Uyezve, iyo keyboard zvakare iri kurasira kusagadzikana nepo mbeva yakanyarara zvakanyanya. Ose ari maviri akabatana kuburikidza neiyo imwechete USB chiteshi.
Yekhibhodi uye mbeva kurongedza ODY neTrust> BUY
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakawedzera Premium, tinoenda takananga kune yakanakisa keyboard iyo yatakamboedza kufambidzana pano pawebhusaiti yedu uye chiteshi chedu. Tiri kutaura nezve Logitech Craft.
Zviripachena kuti isu hatisi kutarisana nechigadzirwa chakachipa, uye inogona kunge iri imwe yemakirabhu akanyanya kugadzirirwa nharaunda yehunyanzvi yatichawana pamusika. Izvozvi iri kutengeswa ye115,90 euros paAmazon. Pasina mubvunzo, kupihwa kwacho kwakanyanya kunaka uye mhando yechigadzirwa chinozvitaurira.
Logitech Craft pamutengo wakanakisa> BUY
Monitoring inogona zvakare kuve imwe nzira yakanaka yekutarisira maziso edu uye nekuvandudza kugadzirwa kwedu, saka Isu tinokurudzira iyo Philips 273B9, inova yekupedzisira iyo yatakaedza uye yakanyanya kutarisana nechikamu chino.
Philips 273B9, Monitor iyo inowedzera teleworking [Analysis]
Kana isu tichifunga kuti inoshanda seUSB-C HUB, iyo inopa 60W kuchaja kune iyo laptop uye iyo ine iyo SmartErgoBase, Zvinotaridza sekuwedzera kwekudyara kwakanaka. Izvo zvinonetsa kuwana vamwe vatariri vane hunhu uhwu uye nemutengo wakaringana uyo unokwanisa kuzadzikisa zvido zve teleworking.
Philips 273B9 kuongorora> BUY
Kuti utange mune Yakabatana Imba kana Smart Imba
Haisati iri nguva yakaipa kuti utange mu Smart Smart neakateedzana ezvigadzirwa zvinoenderana neIoT. Zviripachena mune ino kesi yedu yekutanga mira inoenda yakananga kuiyo nyowani Amazon Echo.
Zvinotaridza kwandiri seyakanakisa nzira yekutanga, nekuti pachinzvimbo iyo Echo Dot inoita kwandiri semubatsiri mune izvi. Iyo Amazon Echo ine Zigbee protocol inoperekedzwa nemagetsi ePhilips Hue uye zvimwe zvigadzirwa zvinowirirana neAki vanogona kuita kuti hupenyu hwako huve nyore sezvatakakuratidza mune imwe yemavhidhiyo edu emota mavhidhiyo.
Energy Sistem zvigadzirwa zvakagadzirirwa imba yakangwara zvagara zvichitiperekedza pawebhusaiti yedu uye hazvigone kuve zvishoma mune ino bazaar. Nzira yakanaka ndeyekuti uve neawa rewarm, mutauri uye charger yakangwara ine Alexa patafura yedu, iyi ndiyo Smart Spika Muka kubva kuSpanish brand.
kurira kwemhando yakakwana kuzadza kamuri nenzira yakajairwa, dhizaini uye zvinhu zvinobudirira chaizvo uye huwandu hukuru hwemabasa avanazvo hunoita chigadzirwa chinonakidza kwazvo. Kutendeseka, zvave zvakaoma kwandiri kuti ndiwane mapoints akashata sezvo zvisingaite zvishandiso zvekuenzanisa nazvo.
Energy Sistem Smart Mutauri Muka> BUY
Zviripachena IKEA yaizotinetsa munguva pfupi inotevera mune yakabatana imba bazaar, uye kufambira mberi kwayo kwazvino kwakave kwakanaka kwazvo. Pano taive neakanaka KADRILJ akachenjera bofu uye hatina kukwanisa kugutsikana.
Kuchengetedza kukuru Nekuti kana iwe ukatenga imwe, unozopedzisira waisa iyo imba yese, kunyanya kana iwe uine rondedzero yezvigadzirwa zvinoenderana neZigbee protocol iyo IKEA ine muchitoro chayo uye zviri pachena kuti zvakachipa pamusika maererano kukosha kwemari.
KADRILJ bofu kubva IKEA> BUY
Multimedia uye varaidzo
Isu tinotanga neicho chiri chokwadi chisina kurira ruzha uye pamba otomatiki chigadzirwa chatakaedza mu2020, muchokwadi Zvinotaridzika kwandiri mune zvakajairika mazwi akanakisa zvigadzirwa zvehunyanzvi zvakapfuura pano gore rapfuura, isu tiri kutaura nezve Sonos Arc.
Sonos Arc inofanirwa kunge pasina mubvunzo mukwikwidzi wekurova mukati memabhawa ezwi, isu tine kuita kwakawanda, premium renji ruzha, kubatana uye nehungwaru maficha. Sonos yakaedzazve mabharuti neArc yayo uye ivo vanozomanikidzwa kumira pairi.
Iye zvino tava kutaura zvishoma nezve mahedhifoni, kana iwe uri kujekeserwa nezvekuenda kune yakanyanya "yepamusoro" renji, akanak kwazvo isu takaedzwa muna2020 aive Huawei FreeBuds Pro, pasina kupokana.
Huawei YemaharaBuds Pro> BUY
Zvisinei, isu takawana zvigadzirwa zvakanaka muhunhu / mutengo muyero kufanana neXellence naX naKygo iyo zvakare ine ANC uye nezwi rinoshamisa.
Iye zvino tava kutendeukira kune chimwe chigadzirwa chinoratidzika kwatiri chechokwadi chaicho uye icho chisingafanirwe kushayikwa mumba mako, kunyanya kana iwe uchida kushandisa zvemberi terevhizheni. Iyo Amazon Fire TV Cube ndicho chigadzirwa chinotenderera chekumisikidza yakanaka multimedia nzvimbo mumba mako uye nemutengo wakasarudzika.
Nekudaro, haufanire kusiya kumashure kweAmazon Fire TV Stick, chimwe chigadzirwa pamutengo unenge usingakundike unoita zvakafanana, asi uine simba shoma shoma uye zviripachena ine yakazara yakazara HD resolution.
Tenga iyo pamutengo wakanakisa> BUY
Pakupedzisira tinokurudzira iyo Kobo Nia, imwe yeakanakisa maReaders nemutengo uri pakati watakaongorora nguva pfupi yadarika. Izvi zviri mukukwikwidzana kwakanangana neakakosha maAmazon Kindle atakaongorora zvakare pano kanopfuura kamwe chiitiko.
Isu tinoshuvira kuti iwe wakafarira kuraira kwedu kwekutenga kweZuva raValentine uye kuti haukanganwe kuti kuActualidad Gadget isu tiripo nguva dzose kuzokubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Zvipo zvakanakisa zvetekiniki Valentine